Xukuumadda Soomaaliya oo soo dhaweysay magacaabista safiirka Mareykanka ee Soomaalia – Radio Muqdisho
Xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxa ay soo dhoweysay Magacaabista H.E. Katherine Simonds Dhanani inay noqoto Danjirihii ugu horeeyay ee Mareykan ah oo loo soo magacaabo Soomaaliya tan iyo sanadkii 1991, tani waxa ay cadeyn u tahay xiriirka fidaya ee labada dowladood iyo labada shacab u dhaxeeya.
Dowladaha Mareykanka iyo Soomaaliya waxaa ka dhaxeeya xiriir dhinacyo badan leh oo uu ka mid yahay iskaashi mira-dhalay oo ku qotama dhinacyada horumarinta si gaar ah qeybta ammaanka , la dagaalanka argagaxisada caalamiga , burcad badeeda iyo xad-uyeelidda saboolnimada . labada dowladood waxaa ka dhaxeeya xiriir taariikhi ah oo qeyb ka ah xiriirka labada shacab , iyadoo Soomaali – Mareykan aad u tira badan ay degan yihiin dalka Mareykanka.
Dowladda iyo Shacabka Soomaaliya waxa ay sii ahaan doonaan saaxiibada iyo isbaheysiyo lagu kalsoon yahay ,iyadoo la xoojinayo xiriirka iyo marinada rasmiga ah ee diblomaasiyadeed ee labada dal , taasoo sii adkeyn karta xiriirka taariikhiga ah.
Isbitaalka Weyn ee Koofurta Galkacyo oo maalintii Sadaxaad ay ka socdaan howlo indha fiiqis lacag la’aan ah “Sawirro”
Siminaar loo qabtay dhallinyaro Soomaaliyeed oo ku nool dalka Koonfur Afrika"sawirro"